Maxay sababta xiddiga Kooxda Manchester United ee Paul Pogba uu marada dheer u soo gashto hal garab ama ugu soo xirto hal gacan? – Gool FM
Maxay sababta xiddiga Kooxda Manchester United ee Paul Pogba uu marada dheer u soo gashto hal garab ama ugu soo xirto hal gacan?
Haaruun November 27, 2021
(Manchester) 27 Nof 2021. Warbixinan waxa aa kaga hadli doonnaa waa maxay sababta uu Paul Pogba marada u soo gashto hal garab ama hal gacan ugu xirto marada dheer oo aan inta badan ku aragno muddooyinkii dambe.?
Xiddig kooxda Manchester United iyo xulka Faransiiska Paul Pogba waxa uu caan ku yahay fashion-ka iyo naqshadaha kala gedisan ee uu timaha u soo jarto, mar uu timaha soo caseysto, mar uu buluug ka soo dhigo iyo mar uu magacyo kala geddisan ku soo qorto, laakiin mowduuceenna maanta ayaa wuxuu yahay sababta uu (Sleeve) ama maro dheer gacmeed dheer uu ugu soo xirto hal garab, midig ama bidix, waa maxay Style-kaas cusub ee uu la yimid Pogba?
Pogba waa xiddig baraha bulshada ay aad u hadal hayso mar walba oo uu timaha soo hagaajisto ama la arko isagoo xarakaat cajiib ah sameynaya haddii ay ahaan lahayd isagoo dansi ama qoob ka ciyaar dheelaya, isagoo heesaya iwm, waxaana akhbaartiisa lagu soo qaataa telefishinnada iyo Jaraa’idyada caalamka.
Sanadkii 2020-kii ayay ahayd markii la arkay Pogba oo garabka ku soo xirtay ama hal gacan ay ugu xiran tahay marada dheer ee loo yaqaan – Baasketball sleeve/Isliif, waxaan aragnay Pogba oo hal garab maro gacma dheere ah soo gashato, garabka kalena soo bannaystay, durbadiiba waa laga yaabaa inaad gartay in bahashaasi tahay midda ay caanka ku yihiin ragga ciyaara kubadda koleyga, loona yaqaanno Basketball Sleeve, waxayna dadku isla dhex mareen sababta uu Pogba sidaa u yeelay, ma dhaawac baa ku yaalla?, Ma Istaayel (style) baa mise Shaabad ayuu ku qarinayaa?.
“Xaqiiqdii maradan gacanta iigu xiran waa mid sida Bantaajada oo kale ah, taas oo loo isticmaalo in ay xanuunka baabi’iso isla markaana kaa difaacdo dhaawaca, markii horena waxay ku bilaabatay xanuun aan ka dareemay suxulka midig, kaddibna isla dhibaatadaas oo kale ayaa misna iga qabatay suxulka bidix isna waan ku xirtay, ujeeddada aan u xirtay waxay ahayd inaan suxulkayga xoogaa diirimaad siiyo halkii aan ka xiran lahaa bantaajada.” ayuu Pogba u caddeeyay inta ku wareersan arrintaa mar uu u warramayay manutd.com.
Sida caadiga ah maradani ku duuban suxulka waxaa loo sameeyay inay caawiso murqaha, isla markaana ay hoos u dhigto halista bararka.
Pogba waa uu la qabsaday halka gacan ee la soo duubanayo illaa uu gaaray inuu iska kari waayo oo ay noqoto mid ka mid ah dharka uu xirto marka uu ciyaarayo, iyadoo haatan aad loola xiriiriyo illaa ayba noqotay astaantiisa ganacsiga ee lagu garto markii la arko.
Pogba ma ahan ciyaaryahanka qura ee Basketball sleeve soo xirta, waxaa jiray ciyaartooy badan oo ay dhaqaatiirtu u soo qoreen in ay xirtaan kaddib markii ay dhaawacyo gacanta ah soo gaareen, laakiin waxaa jira rag dhaawac ka soo gaaray gacanta oo bantaajadii looga duubay markii ay reysteen xitaa aan iska furin sida Benzema iyo Suarez illaa ay bantaajadaasi yar u noqotay calaamaddooda gaarka ah ee lagu garto.
Dhanka kale ciyaaryahanka khadka dhexe ee Paul Pogba waxa uu aad u xiiseeyaa kubadda koleyga, isagoo sanad walba mar booqasho ku taga Waddanka Mareykanka si uu u soo daawado kulan ciyaareed kubadda koleyga ah, islamarkaana ula soo kulmo xiddigaha uu xiiseeyo ee ka dheela NBA-da.
Dhammaadkii ciyaarihii Euro 2016-kii waxaa la daawaday muuqaal video ah oo labada ciyaartooy ee Paul Pogba iyo Romelu Lukaku ay wada ciyaarayaan kulan kubadda koleyga ah (one-on-one), waxaana Pogba uu mar walba sameeyaa waxyaabaha uu aadka u xiiseeyo ee durbadiiba noqdo kuwo lagu sheekeysto warbaahintuna ay aad u hadal hayso.
Barcelona oo weerar kale ku qaadeysa Man City iyo bartilmaameed cusub oo ay Etihad ka dooneyso iyo xiddigaas wakiilkiisa lagu arkay xafiisyada Barca
Ka bogo rikoorka uu Mohamed Salah ka haysto Kooxda Southampton kulammadii uu wajahay ka hor kulankooda maanta